दक्षिण कोरिया। अर्को मा राष्ट्रपति चुनाव, एक महिला जित्यो। यो स्थितिमा, निर्वाचित पार्क Geun-hye ली Myung-BAK बदलिएको थियो। आफ्नो राष्ट्रपति अवधि फेब्रुअरी 2013 मा समाप्त भयो। उनको मतदाता को 51% भन्दा बढी मतदान लागि पोल आए। देश मा समग्र .वाराणसी 75% भन्दा थियो।
कहिल्यै पाक Chon नमस्ते को शासन देखि देश को बासिन्दाहरू थाह दक्षिण कोरिया को अध्यक्ष नाम। उहाँले दक्षिण कोरिया को अर्थव्यवस्था को विकास गति दिए, तर एक तानाशाह रूपमा ज्ञात थियो। उहाँले 1979 सम्म देश नेतृत्व र हत्या प्रयास समयमा मृत्यु भएको थियो। उहाँले सुरक्षा प्रमुख द्वारा गोली थियो।
पहिले गरेको तानाशाह ढलाउनु गर्ने प्रयासहरू। पाक Chon नमस्ते मा एक असफल हत्या प्रयास, fatally पत्नी गोली थियो जब थिएटर, पहिले पांच वर्ष मा। वैवाहिक अध्यक्ष अब प्रविष्ट गर्नुहोस्। आफ्नो आमा को मृत्यु पछि छोरी unofficially देश को पहिलो महिला भयो। पार्क समयमा Geun-hye 22 वर्ष पुरानो थियो।
लगभग 40 वर्ष दक्षिण कोरिया को भविष्य अध्यक्ष यी घटनाहरू यसलाई पछि, आफ्नो बाबु र आफ्नो शासन को अपराधको लागि माफी मागे छ। KYN Hye यी गैरकानूनी कार्यहरू सिकार को नातेदार गर्न माफी मागे, र देश को कुनै प्रगति तानाशाही आतंक र सफाइ छैन भनेर यसो राजनीतिक दमन।
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति: जीवनी
पार्क Geun-hye (02 .02.1952 नदी) परिवारमा पहिलो बच्चा थियो। डेगू जन्म। Dzhi Mann - - र बहिनी - Xie येओंग त्यो एक भाइ छन्। सियोल KYN Hye मा उच्च विद्यालय 1970 मा स्नातक। पनि 1974 मा उहाँले स्नातक Soga पछि स्नातक गरेको डिग्री प्राप्त। उनको विशेषता विद्युत थियो। 1981 मा KYN XE Theological सेमिनरी र प्रेस्बिटेरिटन कलेज ख्रीष्टियन अध्ययन। कि पछि, त्यो राजनीति मा जाने निर्णय गरे।
अध्ययन KYN Hye अन्त्य भएन। 1987 मा (चिनियाँ संस्कृति विश्वविद्यालय), 2008 (विज्ञान र प्रविधि संस्थान) मा, 2010 मा (विश्वविद्यालय लागोस को): आफ्नो सम्पत्ति तीन डिग्री छ। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति विवाहित थिएन, wedlock बाहिर कुनै छोराछोरीलाई छ।
राष्ट्रिय सभा उप KYN Hye पहिलो 1998 मा सुरु भयो। त्यो डेगू को आफ्नो पैतृक शहर को एक जिल्ला निर्वाचित भएको थियो। पछि तीन थप पटक (अप 2012), राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजन।
2004 देखि 2006 को। त्यो महान् राष्ट्रिय पार्टी को टाउको थियो। यो अवधिमा उनको राजनीतिक शक्ति सफल लागि थियो। धेरै विश्लेषकहरूले यसको नाम संग विभिन्न स्तर मा PVA को प्रतिनिधि को चुनाव मा धेरै संग्रामहरू जीतेको श्रेय छन्। अनौपचारिक सर्कलमा KYN Hye को "चुनाव को रानी" यो बावजुद, 2007 मा, त्यो आन्तरिक पक्ष सम्मेलन ली Myung-Bak हराएको भनिन्छ, तर, (दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति 2008 -। 2012 GG)।
PVA लोकप्रियता दर्जा 2011 मा परे। पार्टी KYN यसको डे facto नेता Hye छान्नुको द्वारा "saenuri पार्टी" पुन: नामाकरण। नवीन राजनीतिक शक्ति 2012 मा संसदीय दौड जित्यो र राष्ट्रिय सभा मा बहुमत जित्यो।
यो सफलता एक ठूलो मार्जिन (83% समर्थन) राष्ट्रिय चुनावमा राष्ट्रपति "saenuri पार्टी" को लागि एक उम्मेदवार र रूपमा विश्वस्त जीत रूपमा मनोनीत द्वारा KYN Hye सक्षम छ। देशहरूमा वसोवास उनको उम्मीदवारी (51%) समर्थित छ, को राष्ट्रपतिको पद सौंपन निर्णय गरे।
दक्षिण कोरिया को वास्तविकताहरु
दौड मा आउँदै, पार्क Geun-hye कस्ता चुनौतीहरूको नयाँ राष्ट्रपति सामना गर्नेछ बुझ्छु। तथ्यलाई दक्षिण कोरिया मा वैश्विक संकट, आर्थिक विकास को गति समयमा अस्वीकार छ। पछिल्लो5वर्ष, वृद्धि दर प्रति वर्ष तल 3% परे। व्यापार समुदाय को सबै, आर्थिक रिकभरी सबै आफ्नो बल फेंक मा भनिन्छ कार्यकारी राष्ट्रपतिको पद मा महिला को candidature, को कठिन अवधिमा समर्थन गर्न।
पहिलो कुरा, KYN हे सामना देश को नेता बन्ने - यो विरोध छ। यसको आधार - लोकतांत्रिक संयुक्त पार्टी, कैबिनेट को राष्ट्रपति को कार्य redistribute इच्छा बुझ्न चाहनुहुन्छ र छैन सरकार परिवर्तन गर्न तयार थियो थिएन। पुरानो टोली बीच समर्थन, को ली Myung-BAK मिसिन बाँकी, नयाँ अध्यक्ष पनि थिएन। निर्माण गर्न आफ्नो अझै ठाडो। एकै समयमा सबैलाई प्रभावकारी काम गर्न भनेर मंत्रालयों को समन्वित काम र राष्ट्रपति टोली आवश्यक बुझे। एक बनाउन सुधार प्रक्रिया गर्न सक्षम हुनेछ जब यो स्पष्ट थियो "रचनात्मक अर्थव्यवस्था।"
अर्को वास्तविकता - चुनाव पछि, प्योङयाङ (उत्तर कोरिया) फेरि आफ्नो आणविक स्थिति बारे सम्झाउन र चेतावनी दिए सियोल (दक्षिण कोरिया)। राष्ट्रपति जवान नेता बाहिर पुग्न प्रयास गर्नुपर्छ उत्तर कोरिया को , र दुई छिमेकी देशहरू बीचको सम्बन्ध सुधार गर्न।
अमेरिकी रक्षा सचिव: सूची। रक्षा को अमेरिकी उप सचिव। Ashton कार्टर अमेरिकी रक्षा सचिव: जीवनी, फोटो, कर्तव्य
बिजुली के हो?
यसलाई गर्भवती महिला कफी पिउन लागि सम्भव छ?
आफ्नै हातले घर लागि क्रिसमस सजावट खाना पकाउने
डीएनए अणु: संरचनात्मक संगठनको स्तर
शवर कोठा: डिजाइन, सुविधाहरू, प्रदर्शन र समीक्षा